Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay weerarka huteel SYL
Posted On 10-12-2019, 10:12PM
MUQDISHO, Soomaaliya – Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay in ku dhowaad 100 ruux laga soo badbaadiyey dhismaha huteelka SYL ee magaaladda caasimadda ah ee Muqdisho.
Ismaaciil Mukhtaar Cumar, afhayeenka xukuumadda, oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Twitter-ka, ayaa fahfaahin kooban bixiyey.
"Ciidamada Ammaanka ayaa gudaha Hotel SYL kasoo badbaadiyay ku dhawaad 100 qof oo isugu jira mas'uuliyiin dowladda ka tirsan iyo dad Shacab ah oo ku nasanayay hotelka," ayuu yiri.
Wuxuu ku daray: "Wali xaqiijin ayaa Amniga Goobta ku socota, waxaana gudaha hotelka ku sugan saraakiil ciidan oo gurmad u tagay".
Dhinaca kale, taliska booliska oo war kasoo saarey weerarka ayaa uga digay dadweynaha iyo saxafiyiinta in xiriir lala sameeyo dadka la aaminsan yahay in ay ku go'doosan yihiin gudaha huteelka.
"Waxaan ka digeynaa in xiriir telefoon lala sameeyo dadka shacabka ah ee lagu tuhunsan yahay in ay gudaha ku jiraan inta hawlgalka laga soo afjarayo," ayay tiri Sakiye Xuseen, taliye ku xigeenka bileyska.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarka lagu qaadey huteelkan ammaankiisa aad loo adkeeyo kuna dhow Madaxtooyadda Soomaaliya.
Sidda uu Garowe Online u sheegay Xildhibaan ka gaabsaday magaciisa, dableyda oo goobta ku tegay gaari boolis ah ayaa watay dareeska bileyska. Laba kamida kooxda weerarka fulisay ayaa la dilay.
James Swan oo kusii jeeda magaal madaxda Galmudug
Cabdikariin Guuleed oo si adag u dhaleeceeyay dowladda